China Nyoka Rakaumbwa Aluminium Mhuka Hookah vagadziri uye vanotengesa | Vechidiki
Nyoka Rakaumbwa Aluminium Mhuka Hookah
Muenzaniso Nha .: SY0133
Kurongedza: 25 * 25 * 52cm
Muenzaniso Nha. SY0133
Kurongedza 25 * 25 * 52cm
PCS / CTN 4bv
Ungatanga sei odha?
Unogona kubaya “Kubvunza Zvino” kutumira kubvunza, uye isu tichakupindura neemail munguva pfupi (Muvhuro kusvika Chishanu, pindura mukati memaawa gumi nemaviri; vhiki yevhiki, pindura mukati maawa makumi maviri nemana)
Kana iwe uri muridzi wemhando: unogona kutitumira mifananidzo kana masampuli ekugadzirisa. Isu tine timu yehunyanzvi yevagadziri uye vagadziri vemhando vanozokupa iwo magadzirirwo uye nekukurumidza makotesheni. Kazhinji iyo nguva yekuenzanisira yekutsika kurongedza mazuva matatu, uye iyo nguva yemasampuli sampu mazuva mashanu. Zvinogona kutora nguva yakareba kana paine chiitiko chakakosha.
Kana iwe uri chitoro chekutengesa: epurasitiki hookahs akawanda arimo, isu tinotsigira zvakagadziriswa marogo uye madiki-madiki Wholesale (anopfuura rimwe chete bhokisi). Nezve hookahs zvesimbi, iwe unofanirwa kutirovera runhare kuti tivimbise hesheni.
Isu tine edu patents mazhinji emhando. Kunyangwe iwe uchivatengesa pamhepo kana pasiri pamhepo, haufanire kunetseka nezve kutyorwa kwepatent panguva yekubatana kwedu.
Isu tine nyanzvi yekutengesa zvigadzirwa zvekubatana newe. Mushure mekutumira kubvunza pamazuva ekushanda, isu tinovimbisa kuti iwe unowana mhinduro mukati maawa gumi nemaviri. Munguva isiri-ekushanda mazuva, isu tinopindura mukati maawa makumi maviri nemana.
Isu tine yakasimba kudzora kwemhando kuona 100% kuongororwa kwechitarisiko chezvigadzirwa zvisati zvatumirwa. Zvese zvigadzirwa zvichave zvakanyatso kurongedzwa, uye imwe muzana yezvipenga zvikamu ichapihwa kure muhuwandu kudzivirira kudzivirira kwemugwagwa.
Iyo kotesheni ichapihwa kwauri mukati mezuva rimwe rekugamuchira ruzivo rwakadzama. Mazhinji emidziyo arimo, tichazotumira kunze mushure mekunge maisa odha.
Mharidzo kutungamira nguva:
Kana iwe uchida kugadzirisa iyo nyowani sampuro zvinoenderana nedhirowa, zvinowanzo kutora mazuva gumi nemashanu.
Kana iwe ukajairira pane iripo modhi, isu kazhinji tinogona kuipedzisa mukati mevhiki.
Misa hurukuro nguva:
Tine mafekitori maviri ane nhurikidzwa nhanhatu. Huwandu hwakawanda hwezvinhu hunopedzwa nekukurumidza mukati memazuva manomwe kusvika makumi matatu zvichienderana nekuoma kwemaitiro acho.
Pashure: Yakareruka Dhizaina Girazi Yemazuvano Hookah
Zvadaro: Aluminium alloy marasha mbiya
Yakareruka Girazi Hookah YH-SY026
Yakasarudzika Aluminium Girazi Hookah YH-SYAL12
Akanaka Shisha Bowl
Anti-giravhiti Inotenderera Hookah
Yakakura Aluminium Girazi Hookah
Tsika Dhizaina Mwoyo Shape Hookah